Cabsi xooggan oo ka taagan inuu markale fataho wabiga Shabeelle & Digniin laga soo saaray! | HalQaran.com
Cabsi xooggan oo ka taagan inuu markale fataho wabiga Shabeelle & Digniin laga soo saaray!
Jowhar (Halqaran.com) – Waxaa jirto cabsi la xiriirta inuu fatahaad sameeyo Wabiga Shabelle ee mara deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa maamulka Hirshabelle wuxuu soo saaray digniin la xiriirta arrintaasi.
Wasiir Ku xigeenka Wasaaradda Beeraha Maamulka Hirshabelle Maxamed Bashiir Daqare oo la hadlay Warbaahinta ayaa shacabka uga digay inay ka fogaadaan hareeraha Wabiga.
Wuxuu sheegay Wabiga inuu aad u buux dhaafo xilligan islamarkaana haddii biyaha ay soo fatahaan ay gaysan karaan khasaare kala duwan.
Waxaa uu sheegay inay jiraan dad u jeedooyin kale kaleh, kuwaas oo uu sheegay inay qeyb ka yihiin in wabiga uu ku fataho deegaano kale duwan,isaga oo digniin u diray dadka inta badan sameeyo sida uu wabiga ku fatahi karo, isla markaana uu sheegay inay tallaabo adag ay ka qaadi doonaan.
Sidoo kale, waxaa uu ku amray Guddiyada Kanaaleyda Beeraha Hir-Shabeelle inay iska soo diiwangeliyaan Xafiisyada Wasaradda Beeraha si ay uga wada Shaqeeyaan ka hortagida fatahaadaha Wabiga Shabeelle uu inta badan sameeyo.
Wabiga Shabelle ayaa inta badan fatahaada uu sameeyo waxaa khasaare uu ka soo gaaraa dadka shacabka ah ee beeralayda ah.
Digniin laga soo saaray.